ကော်ဖီသောက်ဖို့နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံး ကော်ဖီဆိုင်( ၄) ဆိုင် – YANGON STYLE
ကော်ဖီသောက်ဖို့နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံး ကော်ဖီဆိုင်( ၄) ဆိုင်
ရန်ကုန်မှာအေးအေးနေလို့ရတဲ့ ဆိုင်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အထဲကမှ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေကို စုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီသောက်ရင်း စာဖတ်ချင်သူတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရမဲ့ ကော်ဖီဆိုင် (၄) ဆိုင် ဖြစ်ပါတယ်။
မြေနီကုန်းမှာ တည်ရှိတဲ့ ဒီဆိုင်လေးကတော့ ကော်ဖီဆိုင်လို့ ခေါ်ဆိုရတာထက်ပိုတဲ့ ခံစားမှုကိုရစေပါတယ်။ အလုပ်ပဲအေးအေးဆေးဆေး လုပ်မလား၊ ကောင်မလေးနဲ့ပဲ First Date မလား၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောရင်းဆုံမလား၊ စာဖတ်ရင်း အနားယူမလား ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ Coffee အဓိကရပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားစရာလေးတွေနဲ့ စုံပါတယ်။ စုံတယ်ဆိုလို့ အစားသမားတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့်နေရာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကော်ဖီကောင်း‌ကောင်းနဲ့ Healthy အစားအစာတွေ ရတဲ့ နေရာလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
တစ်ဆိုင်လုံး ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်စရာကြီး ဖြစ်သလို အပင်လေးတွေလည်း ရောင်းပါတယ် ။ အပင်လေးတွေဆိုရင် ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ ၄၅၀၀ကျပ်ကနေ ၆၅၀၀၀ကျပ်လောက်ထိ အစားစားရှိပါတယ်။ အိမ်အပြန်၀ယ်သွားပြီး ကိုယ့်အိမ်မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရုံးခန်းမှာ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကြည်စေဖို့ ထားလို့ရပါတယ်။
“LEAF Cafe & Plants”
No. 16, Shinsawpu Pagoda St, Sanchaung Tsp. Yangon
Ph no – 09-420037731
Imperial Café & Book
စာအေးအေးဆေးဆေး ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် အကြိုက်တွေ့စေမဲ့ နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်ဆိုလို့ အသစ်ထွက်ရှိတဲ့ စာအုပ်တွေပါ ထားပေးထားပြီး အားလုံးယူဖတ်လို့ရပါတယ်။ သေချာလေးပြန်ထားပေးဖို့ပဲလိုအပ်တာပါ။ Imperial Coffee ကော်ဖီကလည်း အကြိုက်ဆုံးထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်စင် ဖန်တီးထားမှုလေးတွေ၊ Café ကို ဘားပုံစံလေးထိုင်သောက်လို့ရအောင် ဖန်တီးထားတာကလည်း ရန်ကုန်မှာ သိပ်မရှိတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တွေထဲက တစ်ခုလိုပါပဲ။
စာအုပ်စင်လေးတွေဆို Arts ဆန်ဆန် ဖန်တီးထားမှုတွေဆိုရင် ဆိုင်ရှင်ရဲ့ စာအုပ်တွေအပေါ်တန်ဖိုးထားမှုကို ဖော်ပြနေတာပါပဲ။
Ph no- 09-976886668
Pansodan Scene Art Café (ခေါ်) အညာအထာ
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်က ဆူးလေနဲ့ မဝေးတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမှာ တည်ရှိပြီး ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အဦးနဲ့ မြို့ပြကို အပေါ်စီးကနေ ခံစားနိုင်မဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့အငွေ့အသက်ကို ထိစေမဲ့ နေရာလေးတစ်ခုလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နှပ်ကော်ဖီသောက်ရင်း လက်ဖက်သုပ်လေးနဲ့ ဇိမ်ကျမယ်။ ဂီတပိုးဝါသနာပါရင်လည်း ထ တီးလို့ရတဲ့ တူရိယာ ပစ္စည်းလေးတွေ ထားပေးထားပါတယ်။
အနုပညာလက်ရာကို ခံစားချင်သူတွေ လာသင့်တဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်မှာ အနုပညာတွေခံစားရင်း ဂီတပိုး ဝါသနာပါသူတွေဆို စန္ဒယား၊ ပတ္တလား၊ ဂစ်တာတွေလည်း တီးလို့ရပါတယ်။ လာပြီးရင်တောင် ထပ်လာချင်အောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ နေရာလေး တစ်ခုပါပဲ။
ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်သူတွေကတော့ နေရာအသစ်လေးမှာ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရမှာမို့ သဘောတွေ့မှာပါ။ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်တော့ နေ့လယ်ခင်းသွားဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ ဆိုင်ကတော့ ပိတ်ရက်မရှိဖွင့်ပြီး Work Shop တွေ တခြားလာလုပ်တဲ့ events တွေရှိရင်တော့ တစ်ခါတလေ ဆိုင်ပိတ်တတ်ပါတယ်။ Page ကလည်း အသိပေးပါတယ်။
“Pansodan Scene Art Café”
No. 144 (Second Floor), Pansodan Street (Middle Block), Kyauktada Tsp, Yangon
TM Milk & Bakery
ရန်ကုန်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ ထောက်ကြန့်နားက ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အထပ်သုံးထပ်နဲ့ ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီး ထောက်ကြန့်ဘက် တိတ်ဆိတ်တဲ့ နေရာလေးမှာ ဖွင့်ထားတော့ နှစ်သက်မိပါတယ်။ ထောက်ကြန့်ဆိုတော့ ထောက်ကြန့်စစ်သင်္ချိုင်းလည်း ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရသလို TM ဆိုင်လေးကလည်း ကျေနပ်စေမှာပါ။ ၇၀၀ ကျပ်ကနေ ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ပဲဆိုတော့ တော်တော်တန်နေပါပြီ။
သူ့ရဲ့ Trademark ကတော့ နို့နှင့် ပတ်သက်တာလို့ ဆိုနိုင်ပြီး ကော်ဖီနှင့် နွားနို့စစ်စစ်သောက်ရမှာပါ။ Main drink & desserts/ Milk Shakes/ Milk Tea/ Coffee & Tea/ Smoothies/ Juice & Soda တွေ အစုံပါပဲ။
ဆိုင်က ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် နေရာအများကြီးလည်းရှိတော့ ထောက်ကြန့်ဘက်ရောက်ရင် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
“TM Milk & Bakery”
No. 3/412, Myanandar Road, Htauk Kyant, Mingalardon Tsp, Yangon
Ph no : 09 966366481
Opening hours -8:00Am to 9:30Pm